Ciyaaraha | Mustaqbal Radio | Page 10
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha (page 10)
Safafka Rasmiga ah Arsenal vs Stoke iyo Wararkii ugu dambeeyay labada dhinac
Kooxda Arsenal ayaa kulan xiisa badan kuna tirsan Horyalka Ingiriiska garoonkeeda ku qaabili doonta dhigeeda Stoke City. Waxa ay u soo bexeen wareega 8 dhamaadka Europe League iyada oo uu tartantaas muhiim u yahay maadama ay kaas oo kaliya ugu soo bixi karaan champions League. Gunners ayaa ku jirta kaalinta 6-aad ee kala saraynta horyaalka premier league iyaga oo 13 ...
Waqtiga rasmiga ah ee Neymar uu soo noqonayo oo la ogaaday, waa goorma?
Xiddiga Paris Saint-Germain Neymar, oo hada ku sugan dalkiisa Brazil ayaa lagu soo waramaya in uu garoomada kusoo laaban doono “Labo ama Saddex isbuuc kadib,” sida laga soo xigtay macalinkiisa Unai Emery. “Waxaan la hadlay isaga isbuucan, waa mid wanaagsan, nasiino ayuu ku jiraa,” Emery ayaa sidaa yiri. “waxaan hadleeyna markii ugu dambeysay xaaladiisa,”Emery ayaa hadalkiisa ku daray. “Waxuu ku ...
Sergio Ramos oo Dunida kusoo dhaweeyay canugiisii Seddexaad
Ciyaaryahanka Real Madrid Sergio Ramos iyo saaxiibtiis Pilar Rubio, ayaa soo dhaweeyay ugu dambeyntii canugooda seddexaad ka dib markii Ramos uu ka soo laabtay waajibaadkiisa caalamiga ah ee Spain. Kabtanka Real Madrid ayaa markii ugu horeysay isbitaalka ugu tagay Arbacada maanta ah, ka dib markii saxiibtiis ay u dhashay wiilkiisii ​​saddexaad oo loo bixiyay Alejandro. Ramos ayaa ku shaaciyay dhalashada ...
Tottenham oo lasoo saxiixaneysa Bruno Fernandes.
Tottenham ayaa isha ku heysa inay xagaaga lasoo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee Sporting Bruno Fernandes, laakiin waxaa laga yaabaa inuu heshiiska ahaado 87 milyan oo ginni si lagu keenoPremier League. Sida laga soo xigtay wargeyska Portugal, ‘A Bola’, Tottenham ayaa liiska gashatay xiddiga qadka dhexe ee Sporting Lisbon, Bruno Fernandes, waxaana laga yaabaa inuu xagaaga u dhaqaaqo. Fernandes ayaa ...
maxay ahayd sababtii uu Ibrahimovic Man United kaga tagay?
Dhaqtarka qaaska ah ee Zalatan ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga heerka caalami ee Dalka Sweden aysan qorshahiisa ahayn in uu Kansalo heshiiskiisa kana dhaqaaqo United, lakiin waxa go’ankaas ku qasbay ayuu ku sharaxay in ay ahayd guuldaradii United kasoo gaartay Sevilla. 36 jirkan ayuu soo gaaray dhaawac halis ah dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore waxana uu u baahaday in qaliin ...
Tababaraha Barcelona oo shaki galiyay inuu Messi ciyaari karo kulanka Sevilla ee Sabtida.
Tababaraha Barcelona Ernesto Valverde ayaa shaki galiyay inuu ciyaari karo Lionel Messi kulanka Sabtida ee LaLiga ee Sevilla. Lionel Messi iyo Marc-Andre ter Stegen ayaa shaki ku jiraa kulanka Barcelona ay la ciyaareyso Sevilla Sabtida, sida laga soo xigtay macalinkooda Ernesto Valverde. Messi ma uusan ciyaarin qeybo ka mid ah ciyaarahii Argentina intii lagu guda jiray ciyaaraha caalamiga ah sababo ...
Hordhac: Spain vs Argentina iyo wararka labada dhinac
Waa kulan saxiibtinimo oo isha lagu wada hayo marka ay wada ciyaarayaan Wadamada Sapin iyo Argentina. Wararka Labada Xul: Spain: Kooxda martida loo yahay ayaa wayn doonta kubadd sameeyahooda David Silva ka dib markii uu looga reebay xulka sababo shakhsi ah. Labada ciyaaryahan ee Real Madrid Lucas Vazquez iyo Marco Asensio ayaa ka mid ah xiddigaha u tartamaya booska weerarka. ...
Suuqa soo socda, ma noqon doono Suuqa kala Iibsiga Ciyaartoyda ee waa midkii Macallimiinta!
Iyadoo Sanad walba aan aragno ciyaartoydii ugu badnaa in la kala qaato inta suuqu furanyahay, balse Sanadkan macallimiintii ugu badnaa ayaa shaqo ka heli doona kooxaha. Kooxo badan oo ka dhisan horyaalka Premier League ayaa sanadkan waxay doonayaan in ay Tababareyaal badan soo qaataan, keddib hanashadii horyaalka ee naadiga Leicester City Sanado yar uun ka hor, durbadiiba isagoo cusub Antonio ...
Kulamada saxiibtinimo & waqtiyada ay soo galayaan
Waxaa la ciyaari doonaa caawa kulamo xiisa badan oo ku tirsan kulamada saxiibtinimo. Wadamada qaarkood ayaa u socda aar gudsi,sida Dalka Brazil oo la ciyaari doona xulka uu si wayn ugu ciil qabo ee Germany. Labadan xul ayaa kulmi doona markii ugu horeeysay 4-sano kadib ciyaartii ugu dambeeysay oo ay wada yeeshaan ayaana Brazil lagu xasuuqay 7-gool iyagoo wadankooda jooga. ...
Ronaldinho oo sheekeeyay xiriirkii kala dhexeeyay Messi waqtigii uu ka tagayay Barcelona!!
Halyeeyga Brazil Ronaldinho ayaa markii ugu horaysay ka hadlay xiriirka dhaw ee uu la leeyahay xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi. Xiddiga reer Brazil ayaa ka mid ahaa xiddigihii ugu fiicnaa adduunka markii uu Messi horumarka ka sameeyay ee kooxda Barcelona. Labada xiddig ayaa si aad ah isugu dhawaa xilli ay jireen warar sheegaya in ay Barcelona dareensantahay in uu ...
Real Madrid Oo ku fashilantay soo xera galinta Eden Dzeko.
Naadiga Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay ku guuldareysatay inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Roma Edin Dzeko intii lagu jiray suuqa kala iibsiga bishii Janaayo. Chelsea ayaa si aad ah loola xiriirinayay weeraryahankii hore ee Manchester City bilowgii sanadka 2018, laakiin Roma ayaa ugu danbeyntii iska fogeysay iibinta 32 jirkaan heerka caalami. Sida laga soo xigtay wargeyska Marca, ...
AC Milan iyo Juventus oo ku dagaalamaya saxiixa Dani Ceballos.
Kooxaha reer Taliyaani ee AC Milan iyo Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalami doonaan saxiixa xiddiga Real Madrid Dani Ceballos dhamaadka xilli ciyaareedkan. 21 jirkaan ayaa Bernabeu uga soo biiray kooxda Real Betis xagaagii lasoo dhaafay, waxaana lagu soo waramayay inuu raad weyn ku yeeshay Bernabeu ka dib markii uu u ciyaaray Spain oo uu u ciyaarayay ...